Annaga nagu saabsan - JINAN YUXINGAN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
Ganacsiga shirkadu waxa ay dabooshaa iibinta taayirrada shiididda corundum cad, giraangiraha wax shiididda corundum brown, giraangiraha silikoon carbide shiidi cagaaran, resin shiidi giraangiraha, sandpaper, dhoobada shiidi giraangiraha, iwm, iyo sidoo kale iibinta taayirada shiidi dhoobada iyo kale ee abrasives. Waa shirkad ganacsi oo caalami ah oo ku takhasustay iibinta nabarrada, abrasives iyo accessories.
Alaabada shirkadu waxa loo dhoofiyaa in ka badan 20 wadan iyo gobolo ay ka mid yihiin China, India, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Italy, iyo Maraykanka. Waxa uu noqday alaab-qeybiye caalami ah oo ka mid ah agabka xajinta. Iyadoo ay ugu wacan tahay waxqabadkeeda shaqo ee wanaagsan, saxanadahayada jarista waxaa loogu yeeraa kuwa ugu fiiqan ee macaamiisha. ilkaha. Tayada shirkadeena waxay ka gudubtay ISO9001: 2008 nidaamka maaraynta tayada tayada. Hadda warshadeena waxay haysataa in ka badan 100 qalab wax soo saar oo horumarsan. Awoodda wax-soo-saarka sannadlaha ahi waxay ka badan tahay 10,000 oo tan. Shirkaddayaduna waxay cusbooneysiisaa qalabka sannad kasta si ay u ilaaliso tignoolajiyada iyo warshadaha mashiinka. Waxaa jira in ka badan 20 farsamoyaqaanno sare ah, in ka badan 50 farsamayaqaan, iyo in ka badan 30 shaqaale maamulka ah. Marna kuma joogsano jidka hal-abuurka tignoolajiyada. Waxaan si madaxbanaan u naqshadeynaa oo aan u horumarinaa wax soo saarkayaga, si joogto ah u cusboonaysiinta alaabooyinka, la socoshada tignoolajiyada cusub, oo aan soo saarno alaabooyin kala duwan iyadoo loo eegayo shuruudaha dhabta ah iyo shuruudaha wadamada iyo gobollada kala duwan. Isla mar ahaantaana, waxaanu sidoo kale samaynaa ganacsiga farsamaynta OEM, soo dhawaynta macaamiisha dhammaan jihooyinka si ay u soo booqdaan shirkadeena. Waxaan baahidaada ku dabooli doonaa tignoolajiyada heersare ah iyo adeegga ugu fiican, waxaanan abuuri doonaa xaalad guul-guulaysi ah.
Wada-hawlgalayaasha Khubarada ayaa ku heshiiyey
Maalgashadayaasha guryaha cusub ee cusub ayaa dhawaan ka tagay xirfadda oo ay maalgashadaan. Marka aad maal gashato hantida ma-guurtada ah, waxa aad inta badan arkaysaa dhinac bani-aadminimada oo kaydiya, curaarta, miisaaniyada wadaagga ah, iyo badbaadinta lacagta aad gabaad ka dhigato.
JOHN DOE • Maalgeliyaha Hantida
"Nin ma jiro, laakiin wuxuu dareemayaa wax badan oo nin adduunka ah haddii uu haysto laakiin xoogaa dhul ah oo uu ku magacaabi karo tiisa. Si kasta oo ay u yar tahay oogada sare, waa afar kun oo mayl hoose; taasina waa hanti aad u qurux badan.
HARRY SMITH • GURIGA CUSUB